Global Voices teny Malagasy » Malezia: Bilaogera iray hafa indray no voasambotra · Global Voices teny Malagasy » Print
Malezia: Bilaogera iray hafa indray no voasambotra
Voadika ny 22 Avrily 2019 4:47 GMT 1	 · Mpanoratra Daniel Chandranayagam Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Malezia, Mediam-bahoaka, Solovava
Nosamborina  ilay bilaogera Maleziana Syed Azidi Syed Aziz, na kickdefella  ny 17 Septambra 2008. Araka ny tatitra tany am-boalohany, tsy mazava ny fisamborana azy raha noho ny fandrisihana ny vahoaka hanofahofa ny sainam-pirenena mitsimbadika  na noho ny lahatsoratra navoakany . Nanambara ny tatitra hafa fa nohadihadiana teo ambanin'ny Lalànan'ny Fikomiana andininy faha-4 (1) i Syed Azidi .
Araka ny tatitra , nosamborina tao an-tranony tao Kota Baru, any amin'ny morontsiraka atsinanan'ny firenena i Syed Azidi. Nilaza ny vadiny, Bariah, araka ny tatitra fa sahiran-tsaina izy satria tsy namoaka didy fampisamborana ny mpitandro ny filaminana, izay tokony ho fomba ara-pitsarana mahazatra ho an'izay voatazon'ity lalàna ity.
Tsy mahagaga ny fisamborana an'i Kickdefella raha zohiana ny firohondrohona naterany rehefa nanolo-kevitra ireo bilaogera handefa ny sainam-pireneny mitsimbadika tao amin'ny tranonkalam-bilaogin'izy ireo izy. Voalaza fa nohadihadian'ny polisy izy ny 22 Aogositra 2008. Voalaza fa i Syed Azidi tenany mihitsy no natahotra ny ho voasambotra noho ny antsony an-tserasera mba hanofahofaina ny sainam-pirenena mitsimbadika ho mariky ny hetsi-panoherana fa latsaka an-katerena ny firenena.
Niseho dimy andro taorian'ny nitanana tsy nisy fitsarana  an'ilay bilaogera malaza sady mpitantana tranonkala ao amin'ny Malaysia Today  antsoina hoe Raja Petra Kamaruddin (RPK) araka ny lalànan'ny Filaminana Anatiny (ISA) tamin'ny 12 septambra 2008 ity fisamborana ity. Voalaza  fa notanana any am-ponja araka ny ISA i RPK noho ny famoahana lahatsoratra izay nanoso-potaka ny mpitondra ao amin'ny firenena sy nanevateva ny finoana Islamo.
Hatramin'ny nisamborana an'i RPK tsy nampandalovina fitsaràna dia olon-kafa roa ihany koa no nentin'ireo manampahefana teo ambanin'ny ISA. Voasambotra ilay mpanao gazety, Tan Hoon Cheng, ao amin'ny Sin Chew Daily. Tamin'ny voalohany dia noheverina fa noho ny fanamarihany tamin'ny fanavakavaham-bolonkoditra nataon'ilay mpikambana iray avy ao amin'ny fitondrana fiaraha-mitantana no nahatonga izany. Nomena taratasy filazana ny voalohandohan'ny volana noho io antony io ihany ny gazety izay hanoratany. Noafahana i Tan rehefa afaka 18 ora. Nilaza ny Minisitry ny Fonenana, Syed Hamid Albar, araka nitatitra  fa notanana i Tan noho ny fiarovana azy manokana (jereo eto  ny vaovao misimisy kokoa).
Mpikambana ao amin'ny Parlemanta avy amin'ny fiaraha-mitantan'ny mpanohitra, Teresa Kok ny iray nogadraina farany. Voampanga ho nangataka tamin'ny moske mba hampidina ny feon'ny antson'izy ireo rehefa mivavaka izy. Nolaviny io fiampangana io, ary nanamafy ny mpitondra fivavahana avy amin'ny moske fa tsy nanao fangatahana izy na nanao antso fangatahana ho amin'izany. Mbola notanana izy na dia teo aza izany (raha hijery vaovao misimisy kokoa, jereo ato  sy ato ).
Nitranga tao anatin'ny roa ambin'ny folo ora latsaka ireto fisamborana miisa telo ireto. Nanontany tena  ny olona sasany raha izany no fomban'ny manampahefana hampitahorana ny olom-pirenena, indrindra raha jerena ny fikasan'i Anwar Ibrahim hitazona ny fahefana eo amin'ny fitondrana fiaraha-mitantana, izay efa teo amin'ny fitondrana nandritra ny 51 taona.
Niakatra fitsarana i Syed Azidi fa tsy tahaka ireo fisamborana araka ny ISA. Ny 18 Septambra izy no fantatra fa niseho teo anoloan'ny fitsarana tao Kota Baru hahazoan'ny polisy mitazona azy vonjimaika. Nentina tany an-drenivohitry ny firenena, Kuala Lumpur, izy taorian'izay.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/04/22/137224/
 fandrisihana ny vahoaka hanofahofa ny sainam-pirenena mitsimbadika: http://www.nst.com.my/Current_News/NST/Wednesday/Frontpage/20080917183214/Article/index_html
 lahatsoratra navoakany: http://m.themalaysianinsider.com/articles.php?id=9155
 tsy nisy fitsarana: https://advocacy.globalvoicesonline.org/2008/09/12/malaysia-detention-without-trial-for-rpk/
 Malaysia Today: http://mt.m2day.org/2008/
 Nanontany tena: http://www.aliran.com/index.php?option=com_content&view=article&id=715:are-isa-detentions-aimed-at-creating-climate-of-fear&catid=54:2008&Itemid=11